Hal-abuurka Outlier Pro, astaamo qaali ah oo ka hooseeya € 90 | IPhone News
Hal-abuurka Outlier Pro, astaamo qaali ah oo ka hooseeya € 90
louis padilla | 23/04/2022 10:00 | Qalabka IPhone, dhowr
Waxaan tijaabinay sameecado-madaxeedka cusub ee Hal-abuurka, nooca Outlier Pro kaas wax ka yar €90 waxay na siinayaan hawlo loo qoondeeyay moodooyin aad qaali u ah.
Hal-abuurka ayaa na siinaya Outlier Pro cusub oo leh baabi'inta qaylada firfircoon ee isku-dhafka ah, madax-bannaanida illaa saacadaha 60, dallacaadda wireless-ka, shahaado IPX5 iyo cod aad isku dheeli tiran ayaa barbar dhigaya. Haddii aan isku soo wada duubno dhammaan hawlahaas oo aan ku darno in mid kasta oo iyaga ka mid ah uu ku shaqeeyo si heer sare ah, way adagtahay in la rumaysto in qiimihiisu uu ka hooseeyo € 90, laakiin nasiib wanaag, taasi waa run. Waanu tijaabinay, ra'yigayadana waan ku siinaynaa.
2 Joojinta dhawaaqa isku-dhafka ah
3 Codsi aad u dhameystiran
4 Tayada codka
5 Fikirka Tafatiraha
Marka la furayo sanduuqa, waxa ugu horreeya ee aan aragno waa kiiska dallacaadda kaas oo sidoo kale u adeega si loo xafido taleefoonnada gacanta oo had iyo jeer la isticmaalo. Kiisku wuxuu leeyahay a dhammayn macdan ah oo siinaya muuqaal ka duwan sanduuqyada xamuulka caagga ah ee caadiga ah. Dareenka taabashada ayaa ah mid aad u wanaagsan inkastoo ay ka weyn tahay inta badan, naqshadeeda wareegsan iyo dhererkeedu waxay fududeyneysaa in jeebka lagu qaato.
Dibadda waxay leedahay saddex Nalalka LED-yada ee aan tilmaamin heerka dallacaadda sameecaadaha iyo kiska. Halka taleefoonnada dhegaha la gashado oo kaliya ay ka socdaan casaan (lacag) ilaa cagaar (lacag buuxa), LED-ga dhexe ee kiisku tilmaamayo wuxuu leeyahay saddex midab (cagaar, oranji iyo casaan) kuwaas oo tilmaamaya batteriga haray ee ku jira. Markaad dacwad ku dallacanayso, midabka cas ayaa tilmaamaya dallacaadda, midabka cagaarka ahina wuxuu muujinayaa in kharashku dhammaystiran yahay. Si aad u aragto LED-yada waa in aad furto kiiska, kaas oo u janjeera dhinaca muujinaya sameecaadaha.
Sanduuqa waxaan sidoo kale ku haynaa laba qaybood oo talooyin silikoon ah (oo ay ku jiraan kuwa hore ugu soo galay sameecado) si aan u isticmaalno kuwa ku haboon dhegeheena. Fiilada dallacaadda ah (USB-A ilaa USB-C) ayaa sidoo kale ku jira, waxa kaliya ee aan tabayo waa charger-ka, laakiin waxaan ku isticmaali karnaa wax kasta oo aan guriga ku haysanno ama deked ku taal kombayutarkeena.
ka tafaasiisha Taleefannada dhegta-gudaha ayaa runtii cajiib ah marka loo eego qiimahooda:
Isku xirnaanta Bluetooth 5.2
Joojinta Qaylada Firfircoon ee Isku-dhafka ah
60 saacadood oo madax-bannaani guud ah (40 saacadood oo leh buuq firfircoon oo la joojinayo)
15 saacadood oo lacag ah (10 saacadood oo leh buuq firfircoon oo la joojiyay)
Lacag la'aan wireless
Darawalada dahaarka leh ee Graphene
Joojinta dhawaaqa isku-dhafka ah
Ilaa hadda waxa laga yaabaa inaad maqashay laba nooc oo qaylo-joojin ah: Firfircoon iyo dadban. Dabeeciga waxaa lagu gaaraa go'doomin jireed oo banaanka ah, iyadoo la isticmaalayo sameecado dhagaha oo gabi ahaanba daboolaya dhagta ama laamo silikoon ah oo go'doomiyay kanaalka dhegta. Burinta firfircoon waxaa lagu gaaraa makarafoonada ku dhex jira sameecado qaada qaylada dibadda oo tirtira. Makarafoonadani waxay ku yaalaan meel ka baxsan dhegta, taas oo bixisa baabi'in fiican laakiin badanaa waxay saamaysaa codka aad maqashid, ama gudaha, kaas oo inta badan bixiya dhawaaq ka fiican laakiin burintu maaha mid wanaagsan.
La Joojinta dhawaaqa isku-dhafka ah waxaa lagu gaaraa marka la isku daro makarafoonada dibadda iyo gudaha, kaas oo aad isku darayso labada doorasho ee ugu fiican. Intaa waxaa dheer, waa in aan ku darnaa baabi'inta aan tooska ahayn iyada oo ay ugu wacan tahay furayaasha silikoon. Natiijada kama dambaysta ah waa joojinta dhawaaqa wanaagsan, maaha tan ugu fiican suuqa, laakiin haa waxa ugu wanagsan ee aan isku dayay taleefoonnada gacanta ee qaybtaas, iyo wax kasta oo ka sarreeya waxa aan ugu jeclahay waa in codka aad maqasho ay si dhib yar u saameeyaan kicinta ama deminta joojinta, wax caadi ah oo ku dhaca taleefoonnada gacanta ee qiimahan qiimaha marka ay ku jiraan joojinta firfircoon (wax aan caadi ahayn xilligan).
Habka daah-furnaanta ayaa ka yar qancinta joojinta buuqa. Tayada dhawaaqa aad ka hesho dibadda maaha mid cad, oo xitaa u dejinta heerka ugu sarreeya mararka qaarkood waxay adkeynaysaa in si wanaagsan loo maqlo haddii qof kula hadlayo. Waxaad u kala rogi kartaa saddexda hab ( hufnaan, burin, caadi) adoo isticmaalaya kontaroolada taabashada taas oo ku taal dusha sare ee taleefoonnada gacanta. Oo waxaad nidaamin kartaa heerarka qaabka hufnaanta iyo joojinta dhawaaqa firfircoon ee codsiga ee jira Android y macruufka.
Codsi aad u dhameystiran
App-ka hal-abuurka leh ee iOS waxa uu ku oggolaanayaa in aad habayso sifooyin badan oo dhegaha-dhegaha ah. Sidoo kale aad uma badna taleefoonnada gacanta marka qiimahan la joogo inay yeeshaan heerar badan oo wax-ka-beddelid ah. Waxaad wax ka beddeli kartaa sinnaanta codka, si loo siiyo ku habboonaanta baska ama kaliya ka soo horjeeda. Waxa kale oo aad wax ka beddeli kartaa heerarka joojinta dhawaaqa iyo qaabka daah-furnaanta, sidaan horay kuugu sheegnay.
Kuwa kale Ikhtiyaarada habaynta waxa ka mid ah kontaroolada taabashada. Ikhtiyaarada kala duwan ee taleefoonka dhegta ee midig iyo bidix, waxaanu kicin karnaa mugga kor iyo hoos, waxaanu kicin karnaa joojinta buuqa ama qaabka daah-furnaanta, hakinta ama dib u soo celinta dib u soo celinta, ama bilaabi karnaa kaaliyaha farsamada (Siri ee iPhone iyo Google Assistant ee Android). Waxaa jira xulashooyin badan oo lagu habeyn karo kontaroolada, taasna aad ayaa loogu mahadcelinayaa.
Qodobka ugu muhiimsan ee dhegaha-dhegaha, iyo kuwan Hal-abuurka Outlier Pro waxay helayaan darajo wanaagsan. Iyadoo aan la taaban mid ka mid ah sinnaanta, codka ayaa la ogaan karaa iyada oo ay ku badan yihiin baasaska, ma aha wax aad loo buunbuuninayo, laakiin waxay yihiin kuwo cad. Haddii aadan jecleyn, waxaad wax ka beddeli kartaa sinnaanta, ama haddii aad u maleyneyso inay weli gabaabsi yihiin, markaas waxaad haysataa meel aad ku kordhiso. Anigu shakhsi ahaan waan jeclahay codka ay ku bixiso default, waxa ay leedahay heer mug fiican, qalabyada iyo codadkana aad bay u kala duwan yihiin. Codkeedu wuxuu soo dhawaadaa tayada taleefoonnada gacanta ee kale ee qiimahoodu ka badan yahay laba jeer.
Hal-abuurku wuxuu ina siinayaa codka Holographic SXFi, wax aan la mid noqon karno "Dolby Atmos" ee Apple Music oo leh AirPods Pro. Tan waxaan u haynaa codsi gaar ah oo ay tahay inaan soo dejino (isku xirka), iyo sidoo kale mara habka qaabeynta xoogaa dhib badan, laakiin natiijada ugu dambeysa waa u qalantaa. Naxdintu waa in ay la shaqeyso oo keliya muusikada lagu kaydiyo qalabkaaga, kuma habboona adeegyada qulqulka, sidaa darteed isticmaalkeeda micros-ga waa mid xaddidan.
Hal-abuurka Outlier Pro wuxuu u taagan yahay madax-bannaanidiisa ugu wanaagsan, isagoo leh wax ka badan oo la aqbali karo joojinta dhawaaqa firfircoonida iyo dhawaaq qumman oo u dhexeeya qiimaha qiimaha aan ku soconno. Codsi leh xulashooyin badan oo qaabeynta ayaa dhameystiraya jaangooyooyinka qiimaha lacagta ay u tahay beddelka ugu wanaagsan kuwa raadinaya taleefoonnada dhegaha ee wanaagsan oo leh hawlo qaali ah oo ka hooseeya € 90. Waxaad ku iibsan kartaa €89,99 bogga hal-abuurka (isku xirka) iyo haddii aad isticmaasho koodka dhimista OUTLIERPRO waxaad yeelan doontaa qiimo dhimis 25%. iyada oo waxa ku hadhay qiimo cajiib ah.
Hal-abuurka Outlier Pro
Ku dhejiyay: 23 April 2022
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 23 April 2022
Ismaamul heer sare ah
Joojinta qaylada firfircoon ee wanaagsan
Codsiga leh xulashooyinka habaynta
Ma jiro ogaanshaha dhegta oo hakisa dib-u-qaadista marka la saaro
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Hal-abuurka Outlier Pro, astaamo qaali ah oo ka hooseeya € 90
IPhone 14 Pro wuxuu lahaan doonaa naqshad ka wareegsan marka loo eego iPhone 13
Hel Maalinta Dhulka 2022 Loolanka Daabacaadda Xaddidan ee Maanta